हेर्ने चलचित्र पहिले नै कठिन दिनको काम पछि आराम गर्न वा राम्रो समय बन्द छ ठूलो तरिका धेरै मान्छे को लागि भएको छ। फिलिमहरु को एक विशाल संख्या ल्याइने मा। तथापि, ध्यान साँच्चै योग्य छन् तिनीहरूलाई जो निर्धारण गर्न गाह्रो छ। प्राथमिकता फिलिमहरु धेरै अन्त सम्म पहिलो मिनेट देखि दर्शक गरेको ध्यान कब्जा र स्क्रीन मा पकड गर्न सक्षम छन् कि ती छन्। यी चलचित्रहरू त अक्सर छैन आउँछन्। तथापि, साँच्चै उल्लेखनीय काम को एक सभ्य राशि गत पन्ध्र वर्ष खिच्नुभयो थियो। यस लेखमा हामी पहिलो मिनेट देखि सबै भन्दा राम्रो चलचित्र केही, रोमाञ्चक कल हुनेछ। तिनीहरूले वर्ष आउन लागि देख पछि सम्झना छन्।
हामी तपाईंलाई विभिन्न वर्ष को फिलिमहरु केही सभ्य उदाहरण दिन हुनेछ। तपाईं विभिन्न विधाहरू र सबै स्वाद को लागि बनेको फिल्म कदर गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई आफु को लागि उपयुक्त केहि पाउन सक्नुहुन्छ भनेर।
हाम्रो शीर्ष फिलिम, पहिलो मिनेट देखि रोमाञ्चक सुरु, हामी अमेरिकी सिनेमा अनुभवी Klinta Istvuda यस कृति संग निर्णय गरे। "रहस्यवादी नदी" - एक अप्रत्याशित नतिजा व्यस्त गुप्तचर रोमाञ्चक को एक उत्कृष्ट उदाहरण। फिल्म, शन पेन, टिम रबिंस, केविन Beykon र Lorens Fishbern जस्तै विधा यस्तो मालिकको, अभिनय गर्ने कलाकार। तर सबै को पहिलो, यो फिल्म दर्शक धेरै नाटक र अनपेक्षित twists प्रस्तुत जो आफ्नो षड्यन्त्र, गर्न मूल्यवान छ।
दाऊदले लिंच - अतियथार्थवाद को मास्टर। वर्ष आफ्नो निर्देशन क्यारियर भन्दा, उहाँले विषयहरू मा एक दर्जन फिल्म जो दर्शकहरुले यस दिन आफ्नो टाउको scratching निर्देशित। यो filmmaker सधैं पहेली को एक मास्टर भएको छ। र यो उल्लेखनीय फिलिम - अर्को पुष्टि। फिल्म, त्यहाँ केही अप्रत्याशित षड्यन्त्र जो अग्रिम असम्भव छ भविष्यवाणी, उत्तेजित गर्दछ छन्। र एक राम्रो फिलिम लागि यो एक विशाल प्लस छ।
ब्रिटिश निर्देशक भोजपुर Richi को क्यारियर मा दोस्रो फिल्म। दिग्गज "लक, स्टक र दुई धूम्रपान बैरल", कालो कमेडी अपराध को विधामा खिच्नुभयो यो काम जस्तै। यहाँ मात्र भोजपुर Richi को निपटान यो समय धेरै बढी पैसा थियो। र कास्ट एक प्रमुख हलिउड स्टार, ब्राड पिट थपियो। परिणाम हास्य को एक महान अर्थमा एउटा उदाहरणीय फिल्म भएको थियो। पनि गति तस्वीर को पन्ध्र वर्ष पछि नै सास देखिन्छ।
अर्को कृति फिलिम, पहिलो मिनेट देखि रोमाञ्चक। रात Shyamalan - एकदम एक असाधारण निर्देशक। ख्याति जो हलिउड जित्न गए जो विदेशीहरू लागि दुर्लभ छ, चाँडै पर्याप्त उहाँलाई आए। धेरै Shyamalan मुख्य रूप समकालीन निर्देशक त एक रोमाञ्चक रूपमा लोकप्रिय विधा उत्कृष्ट चलचित्र लिन्छ विश्वास गर्छन्। र यो आफ्नो ट्रयाक रेकर्ड देख तर्क गर्न गाह्रो छ। "छैटौं Sense" - मास्टर को पहिलो निर्देशक को एक। र यहाँ उहाँले एक अप्रत्याशित finale एउटा असामान्य कथा सिर्जना गर्न सक्षम थियो। Bryus Uillis अन्तमा उनले छैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्षम थियो कार्य नायक, तर पनि एउटा अचम्मको नाटकीय अभिनेता। पक्कै, यो आफ्नो क्यारियर को आफ्नो सबै भन्दा राम्रो भूमिकाको को छ।
दक्षिण कोरिया राम्रो चलचित्र हामीलाई प्रसन्न गर्न बन्द, र 21 औं शताब्दीमा छैन। विशेष गरी excelled जसले हामीलाई केही उल्लेखनीय तस्वीर दिनुभयो पार्क चान-Uk। को अमेरिकी विपरीत, निर्देशक छैन परीक्षण र केही नयाँ कुरा आविष्कार डर छ। "Oldboy" - धेरै लाग्यो-बाहिर षड्यन्त्र संग एक कठिन र रक्तपातपूर्ण फिलिम। यस कोरियाई पैसा धेरै छैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तिनीहरूले पहिलो मिनेट देखि मनोरम, एक फिलिम गोली गर्न सक्षम थिए। तस्विर धेरै अन्त गर्न सुरुदेखि एक गो मा देखिन्छ। unnoticed द्वारा एक फ्लाई हेर्दै गर्दा दुई घण्टा।
अरू के तपाईं पहिलो मिनेट टाढा पूरा, एउटा चलचित्र दर्शक सिफारिश गर्न सक्छन्? "पाप सिटी" - स्क्रिन, हास्य को इतिहास मा सायद सबै भन्दा राम्रो। एक साधारण दृश्य साझेदारी जो विभिन्न छोटो कथा, एक संग्रह - यो छ। रबर्ट रोड्रीगेज शैली को सबै भन्दा राम्रो परम्परा मा एक स्टाइलिश नव-Noir सिर्जना गर्न सक्षम थियो। दृश्य समाधान विचलता छन्। साथै, कुनै कम प्रभावशाली देखिन्छ र कास्ट: Elaydzha Vud, Dzheysika Alba, Bryus Uillis, Mikki Rurk, Klayv Ouen र धेरै अन्य। तिनीहरू सबै यो फिलिम उपयुक्त र सुखद आश्चर्य असामान्य भूमिकाको छ मा हेर्न। फिल्म deservedly प्रतिष्ठित फिल्म चाडहरूमा सकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै, साथै प्रमुख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
"ब्रुग्स मा" आइरिस tragicomedy आपराधिक - Auteur सिनेमा र मुख्यधारा प्रशंसक दुवै प्रशंसक अपिल गर्न सक्ने फिलिम गुणस्तर को एक उत्कृष्ट उदाहरण। फिल्म मामला बढ्तै र ब्रुग्स भनिने सहरमा हाकिम लुकाउने को आदेश मा अब दुई mercenaries बताउँछ। यसको चरित्र र दृष्टिकोण जीवन नायक मा अनुसार Brendana Glisona र कलिन Farrell दोश्रो देखि धेरै भिन्न छन्। एक आफु को लागि एक असामान्य शहर हेर्न मौका स्वागत गर्दछौं। तर दोस्रो एक गंभीर निराशा छ र समय बारहरू मा पिएको रही बिताउनुहुन्छ। सम्प्रदाय चलचित्र तपाईंको ध्यान योग्य छ।
"म शैतानको देखें"
अर्को दक्षिण कोरियाली फिलिम, पहिलो मिनेट देखि कब्जा छ। र यसलाई फेरि एक गुणस्तर रोमाञ्चक छ। "Oldboem" संग मामला छ, यहाँ यो रक्तपातपूर्ण हिंसाको भरिएको छ। तर यो सबै दर्शक तर्साउने प्रयास जस्तो देखिदैन। बस रचनात्मक हरर र पागलपन को माहौल व्यक्त गर्न फरक बस असम्भव छ। त्यसपछि तिमी र sadistic freaks र cannibals र कानून र व्यवस्था को सेवक बदला संग Obsessed। यो अभिनेता कसैलाई सकारात्मक चरित्र सकिन्छ कि असम्भाव्य छ। फिल्म सिकार को एक ठूलो संख्यामा जान्छ जो एक standoff छ। Uncompromising चलचित्र, हरेक फिलिम प्रशंसक हेर्न बाध्य छ जो।
"28 दिन पछि"
हामी पहिलो मिनेट देखि चलचित्र, रोमाञ्चक कुरा भने, यो पंथ प्रेत हरर उहाँले लाख डलर बस एक जोडी लिए जो डैनी बयल, सम्झन छैन असंभव छ। तर यो साँचो कृति सिर्जना गर्न, र यस्तो योजना को फिलिमहरु लागि फैशन को स्क्रीन फर्कन पर्याप्त थियो। ती वर्षसम्म यो विधा लामो यसको उपयोगिता outlived छ र पछिल्लो एक relic छलफल भएको थियो। तर, ब्रिटिश यो साँचो होइन भनेर साबित गरेको छ। फिल्म अविश्वसनीय वायुमण्डलीय बाहिर गरियो। पहिलो र मुख्य यो ध्वनि को लेखक को एक योग्य छ, स्मृति मा लामो खान्छ कि उत्कृष्ट संगीत सिर्जना गरियो। यस फिल्ममा सुन्दर छ र Killian Merfi, केही वर्ष पछि अन्ततः एक प्रमुख हलिउड स्टार बन्न गर्ने।
"मिलियन डलर बेबी"
खेल नाटक, पनि सिनेमा को यो विधा सानो चासो भएकाहरूलाई खुसी हुनेछ जुन। फिल्म गर्ने कुनै कुरा के आफ्नो लक्ष्य तिर हिड्ने थियो केटी बारेमा बताउँछ। कि यो लागू गर्न एक सपना बारेमा यो फिलिम, र सबै उपलब्ध साधन खोज्न आवश्यक छ। साथै, एकदम नाटकीय र एकदम संभवतः फिल्म तपाईं अन्त मा एक टियर बगाएको बनाउन। एक शानदार फिलिम र शैली को एक मोडेल प्रतिनिधि।
एक असामान्य कालो हास्य तपाईंलाई प्रसन्न हुनेछ असामान्य कमेडी Suffice। चलचित्र मा तपाईंलाई आश्चर्य हुनेछ कि केही एकदम रक्तपातपूर्ण क्षणमा छन्। र "11:14" catchy कहानी। को गति तस्वीर धेरै जस्तो देखिने प्रत्येक अन्य कथाहरू असम्बन्धित मा। तर फिल्म को पाठ्यक्रम तिनीहरूले सँगै सामेल छन्। नाम त्यहाँ वर्णन सबै घटनाहरू थिए जसमा समय जनाउँछ। फिल्म एक साना दर्शक जस्तै छ।
"शिकार" - यो पक्कै पनि पहिलो मिनेट देखि कब्जा एक फिलिम छ। यो वर्ष आउन लागि मान्छे उतेजित गर्नु हुनेछ सान्दर्भिक प्रश्न उठ्छ। यो भद्र डेनिस नाटक निश्चित Arthouse र Auteur सिनेमा को प्रशंसक अपिल। Mads MIKKELSEN, एक प्रमुख दुनिया तारा बन्न समय द्वारा पहिले नै थियो, जसले, आफ्नो क्यारियर को आफ्नो सबै भन्दा राम्रो भूमिकाको एक प्ले।
"पागल अधिकतम: रोड उतेजना"
के फिलिमहरु 2015-2016, पहिलो मिनेट देखि रोमाञ्चक, हामी सिंहावलोकन गर्न सिफारिश गर्न सक्छन्? हामी विचार चित्र "पागल अधिकतम: रोड उतेजना" कुनै परिचय आवश्यक छ। दिग्गज मताधिकार प्रशंसक नयाँ भाग एक धेरै लामो समय प्रतीक्षा थियो। र अब, त्यसैले धेरै वर्ष पछि, Dzhordzh मिलर एक पटक उहाँलाई महिमा जो तस्वीर, फर्काउँछ। फलस्वरूप, उमेर-निर्देशक अझै अझै पनि छ कि पुरानो कुकुर जीवन हामीलाई साबित गर्न सक्षम थियो। एक पल को लागि स्क्रिन समय भीड को डेढ घण्टा। ठूलो आकर्षण संग राम्रो चलचित्र बनाउन-अप र विशेष प्रभाव।
"Kingsman: गुप्त सेवा"
हालैका वर्षहरूमा फिलिम झन् जासूसी विधा बारी भएका छन्। तर, चलचित्र "Kingsmill" यो विधा अन्य फिलिमहरु देखि धेरै फरक छ। यस मामला मा, गोली हास्य को कुनै सानो रकम सबै। यो फिल्म पनि एकदम गाह्रो हुन्छ भन्ने टिप्पण लायक छ। विधा हेर्ने प्रशंसक आवश्यक छ।
"द घृणित आठ"
क्षण फिल्म आधुनिक क्लासिक Kventina Tarantino मा अन्तिम। यसलाई मा, त्यो फेरि पश्चिमी को विधामा काम गर्ने निर्णय गरे। तर, यो "Django Unchained" विपरीत, फिल्म बाहिर धेरै तीतो गरिएका छ। यो हिउँ छोपेको स्थानहरू, तर एक सम्पूर्ण रूपमा षड्यन्त्र मात्र होइन facilitated छ। सधैजसो, Tarantino आफ्नो फिल्म सबैभन्दा तारकीय डाली सदस्य मा संकलित छ। सबै, अपवाद बिना तिनीहरूले भूमिकाको संग सामना गरेका छन्।
उल्लेखनीय कार्य कमेडी भोजपुर Richi, उहाँले फेरि समय को क्षण मा हलिउड उहाँले केही साथीहरूको छ दर्शक साबित जसमा। यो फिल्म गत शताब्दीको दोस्रो आधा को लोकप्रिय श्रृंखला को एक मुक्त remake छ। यसलाई गरिएका रूपमा, कथा र अझै पनि ठीक देखिन्छ।
सायद सबै भन्दा राम्रो छ कि वर्ष kinokomiks। निर्देशक "Deadpool" प्राप्त किन वयस्क मूल्याङ्कन जो चटाई र रक्तपातपूर्ण दृश्य, पूर्ण छ जो एक चलचित्र बनाउन डर थिएनन्। तर यो सबै गति तस्वीर लुढका बन्न रोक्न र दर्शक को मनपर्ने हिट भएन। धेरै छाडा हास्य को राशि रोकते सक्छ। तथापि, फिल्म ठ्याक्कै जवान मानिसहरू र हास्य को प्रशंसक मनपर्छ।
"आउट ल-एक: स्टार वार्स कथाहरू।"
सबै चिरपरिचित ठाउँ सागा गर्न उत्कृष्ट साथै। नयाँ वर्ण यो kinovselennuyu र पर्याप्त कहानी पूरक गर्न सक्षम मा पूर्ण फिट। धेरै दर्शकहरु फिल्म एकल युद्धमा Lightsaber छैन भन्ने तथ्यलाई द्वारा विरक्तलाग्दो। तर, स्मरणीय क्षण प्रशस्त छन्। मात्र डार्थ Vader गरेको महाकाव्य को उपस्थिति छ!
"को ग्यालेक्सी को संरक्षक।" भाग 2
यो दुर्लभ मामला, दोस्रो भाग मात्र खत्तम, तर पनि पहिलो फिल्म भन्दा राम्रो थियो जब। निर्देशक सक्षम कम्तिमा एक सशक्त कथा संग आउन, र यो नयाँ वर्ण मा एकदम सफलतापूर्वक प्रवेश थियो। पछिल्लो समय जस्तै, "यो ग्यालेक्सी को संरक्षक" बाहिर मजा र स्मरणीय गरियो।
एक वर्ष को सबै भन्दा ठूलो फिलिमहरु को। "पहिलो समय" - शैली को प्रशंसक खुसी हुनेछ जो कस्मिक नाटक गुणस्तर, को एक उत्कृष्ट उदाहरण। दृष्य उच्चतम स्तर मा अन्तरिक्ष मा खिच्नुभयो। र Mironov Khabensky, सधैं रूपमा पूर्ण आफ्नो कार्यहरू सामना।
सायद लोकप्रिय मताधिकार "एक्स-पुरुष" को सबै भन्दा राम्रो भाग। "Detpula" को संस्थापक को उदाहरण निम्न, यो आर मूल्याङ्कन एउटा चलचित्र बनाउन पहिलो मामला मा यो vulgarity असर गरेको छ भने, जोर स्क्रिनमा भइरहेको छ के को bleakness र निराश छ यस मामला मा निर्णय भएको थियो तर। र झगडे दृष्य क्रूर र विश्वास गर्न सकिने को सबै भन्दा राम्रो गर्न राख्नु थिए। योग्य वोल्भेरिन को कथा समाप्त।
"टी2Treynspotting" ( "सुई2मा")
स्क्रिनमा प्रसिद्ध वर्णको विजयोल्लास फिर्ती। पहिलो भाग को रिलीज देखि यो यति लामो भएको भनेर विश्वास गर्न गाह्रो। व्यवस्थित वर्षौंदेखि अभिनेताहरु केही वास्तविक तारा बन्न। र Denni Boyl संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय निर्देशक को एक भए। यो फिल्म, त्यो पागल वातावरण फर्कन, साथै छ कि छैन मूल गर्न कमसल कथा संग आउन सक्षम थियो।
"टाढा" - एक धेरै पहिले मिनेट कब्जा कि संसारभरि हल्ला धेरै काम गरेकी फिलिम, नवीनता। जोर्डन Peele - महत अमेरिकी हास्य अभिनेता। सबैको आश्चर्य गर्न, त्यो वास्तविक तर्साउने, पनि व्यंग्यात्मक हटाउन निर्णय गर्छ। फिल्म बक्स कार्यालयमा पैसा धेरै कमाएको र एक प्रमुख हिट भयो। र उचित त्यसैले, त्यसैले असामान्य र फिलिम तनावपूर्ण दिइएको।
एक gripping कहानी अर्को सफल फिलिम, एक हास्य पुस्तक आधारमा। अब सबैले यो फिल्म स्टूडियो डीसी शायद पिट्न सकेको भन्ने तथ्यलाई कुरा छ। र केही सत्य छ। न्यूनतम मा, यो फिल्म निश्चित क्षणमा आफ्नो सिर्जनाहरू को सबै भन्दा राम्रो छ। आश्चर्य नारी बारेमा एकल फिलिम दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। र आफ्नै असल तिनीहरूलाई प्रत्येक। म मात्र हास्य को प्रशंसक गर्न जस्तै फिलिम को यो रील लाग्छ, तर पनि साधारण दर्शकहरूलाई गर्ने साहसिक र कल्पना जस्तै।
यो श्रृंखला "को वायर": समीक्षाएँ दर्शकहरूलाई
Monika Beluchchi: Filmography र जीवनी। Monikoy Beluchchi संग फिलिमहरु को सूची। पति, छोराछोरी, र मोनिका Bellucci को व्यक्तिगत जीवन
Sith - तिनीहरूले छन्? "स्टार वार्स" महाकाव्य मा Sith
व्यक्तिगत जीवन Burak Ozchivita। कि, अलग सिनेमा देखि, टर्की Burak Ozchivita एक सेक्स प्रतीकको रूपमा जीवनमा?
पर्यटक आकर्षण र ओडेसा रोचक स्थानहरू
आर्थिक, विषय, वा अग्र-दल - र bachelorette पार्टी सूट तपाईं को के विचार छ?